MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward တန်ဖိုးထားလေးစားရပါသော MPT သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများခင်ဗျာ ? - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
တန်ဖိုးထားလေးစားရပါသော MPT သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများခင်ဗျာ ?
MPTနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး၌ COVID-19 ရောဂါကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း ယမန်နေ့က သိရှိခဲ့ရပါသည်။
MPT အနေဖြင့် MPT ကိုယ်စား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသော အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီး အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MoHS) နှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မိမိတို့မှ အပြည့်အဝလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင်ရှိသော ဝန်ထမ်းနှင့် အတူတကွ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်း များ၊ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိသူများအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ များနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အသွားအလာ ကန့်သတ် ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် MoHS ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ငန်းအတွင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြင်ပသို့ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု မရှိစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT ၏ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း MoHSမှ ချမှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို လျော့ချရန် အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေး ကြပါရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် MPT အနေဖြင့် မိမိတို့ဝန်ထမ်းများ ၊ စီးပွားရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်း အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သူများနှင့် အနီးကပ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။